Waxaan rabaa nin caano ma daadsha ah sifiicana sariirta iigu qancin karo aan CAYIILNEEN HABA IGU SHEEGIN CALOOL | Gaaloos.com
Home » galmada » Waxaan rabaa nin caano ma daadsha ah sifiicana sariirta iigu qancin karo aan CAYIILNEEN HABA IGU SHEEGIN CALOOL
Waxaan rabaa nin caano ma daadsha ah sifiicana sariirta iigu qancin karo aan CAYIILNEEN HABA IGU SHEEGIN CALOOL
magaceyga waa najma ahmed oo ku nool cariga wadanka Mareykanka waxaan doonayaa in baari ah oo caano madaadshe ah ninkaas oo aan laheyn calool ragga caloosha leh kama helo. Fadlan walal hadii aaad diyaar tahay igala soo xiriir ciwaanada iyo nambarkeyga hoose ku qoran.
Waxa marag ma doonto ah, in wakhtiga galmada ay niyad jab wayn ku tahay lamaanaha in midkood uu hore u biyo baxo isagoon qofkii kale gaadhin ahmiyadii () taasoo raga ay dhibaatadani haysato ay anfariir ka qaadan,
inay la galmoodan xaasaskooda dhibatadan awgeed, iyagoo isku arka inaanay ahayn nin buuxa.
Run ahaantii taasi waxa aad ogata in xanuunkan premature ejaculation uu yahay ka ugu sahlan ee laga dawoobi karo, qofkana nolosha lamaanihiisu ay ku hagaagi karto. Isku soo wada duuboo, dhibaaatada ugu wayn ee ka iman kartaa waxa weeye inaad qancin kari waydo xaaskaga taaso mararka qaar keenta xidhiidh xumo qoys.
Inagoo soo gaadhnay nuxurkii maqaalkeenan, warka fiicani waxa uu yahay in xanuunkan looga dawoobi karo si aad u dhibyar. Akhriste, hadii aad hore ugu tagtay dhakhtar oo uu kusoo qoray kiniinada awooda siiya ninka xiliga galmada ee ay ka midka yihiin, Viagra, creams, spray etc, waxaad ogaataa in xaaladu ay kasii darayso, waxa la isku raacay in dhamaanba kiniinada noocaas ah ee tamarta siiya raga ay yihiin qaar aan haba yaraatee waxba ka tarin xanuunankan biya baxa.
Title: Waxaan rabaa nin caano ma daadsha ah sifiicana sariirta iigu qancin karo aan CAYIILNEEN HABA IGU SHEEGIN CALOOL